प्रवास Archives - Sudur Khabar
Home > प्रवास
Sudur Khabar January 18, 2018 प्रवास 0
काठमाडौं, माघ ४ । जापानमा सडक दुर्घटनामा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ। घटनामा अर्का एक नेपाली पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका–६ का ३० वर्षीय किरण सापकोटाको मृत्यु भएको छ,भने उनीसँगै गम्भीर घाइते भएका नेपालीकाे विवरण थाहा हुन सकेको छैन। घटना मंगलबार मध्यरात भएको भए पनि प्रहरीले बुधबार
केपी ओली सङ्गै हिमानी पनि नेपाल फर्कने …
Sudur staff January 17, 2018 January 17, 2018 प्रवास 0
काठमाडौं, माघ ३ । पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह भाेलि बिहिबार स्वदेश फर्कदै छिन्। गत पुस २१ गते थाइल्याण्डको बैंकक गएकी उनी भाेलि फर्कन लागेकी हुन्। छोरी पूर्णिकालाई लिएर उनी बैंकक गएकी हुन्। बैंककमै बसेर अध्ययन गरिरहेकी पूर्णिकाको नेपाल बसाइको बिदा सकिएपछि छोरी छोड्न हिमानी गएकी हुन्। छोरी छोड्न गएकी हिमानी १३
लाखौ कमाएर बिदेशी भुमीमा सयर गर्ने नेपालीको सपना समुद्रको एकै छालले स्वाहाँ बनायो एक कहाली लाग्दो पिडा ….
admin January 16, 2018 प्रवास 0
म्याग्दी, माघ २ । म्याग्दीको प्रमुख आयस्रोत बनेको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । अवैध बाटो भएर असुरक्षित रुपमा यूरोप र अमेरिका पुग्ने सपना बुनेका युवा वर्ग जानाजान ठगिन बाध्य छन् । राम्रो जागिर खाने, धेरै आम्दानी गर्ने र सुविधासम्पन्न जीवनशैली बिताउन पाउने जस्ता मानव तस्करको मिठा प्रलोभनमा परेर
कोरिया बाट आयो अहिले सम्मकै दुःखद खबर ! ८१ जना नेपालीको कामदारको मृत्यु, कारण पत्तालगाउन अनुसन्धानटोली कोरियातिर जादै …
कोरियामा ८१ जना नेपाली कामदारको मृत्यु, अनुसन्धानका लागि टोली जादैँ कोरियाले इपिएस परीक्षामार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकबाट कामदार झिकाउन लागेको पनि वर्षौ बितिसकेको छ । नेपालबाट कोरियाका लागि काम गर्न जान लागेको पनि ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अबधिमा ८१ जना कामदारको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भएको छ । सन् २०१८
Ganesh Thagunna January 15, 2018 प्रवास 0
-सन्तोष गौतम(रासस): म्याग्दी, माघ १ । म्याग्दीको प्रमुख आयस्रोत बनेको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । अवैध बाटो भएर असुरक्षित रुपमा यूरोप र अमेरिका पुग्ने सपना बुनेका युवा वर्ग जानाजान ठगिन बाध्य छन् । राम्रो जागिर खाने, धेरै आम्दानी गर्ने र सुविधासम्पन्न जीवनशैली बिताउन पाउने जस्ता मानव तस्करको
कुवेतमा नेपालीले सुरु गरे ‘प्रेम बचाउ अभियान’
Ganesh Thagunna January 13, 2018 प्रवास 0
कोशराज राई/कुवेत । पुस २९ – कुवेतमा ‘प्रेम बचाउ’ अभियान सुरु भएको छ । २१ महिनादेखि साउदीमा जेल सजाय भोगिरहेका इलामको माइ नगरमालिका ५ का प्रेम राईले जेलमुक्त हुन तिर्नुपर्ने ९५ लाख रुपैयाँ जुटाउन चक्र कुलुङ राईको संयोजकत्वमा ‘प्रेम बचाउ’ अभियान सुरु गरिएको हो । प्रेम बचाउ अभियान मुल समिति काठमाडौं साउदीले
मलेसिया, पुस २७ । मुनस्पेस र वानडब्लुवानबी (Monspace / 1w1b)जस्ता नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले मलेसिया लगायत खाडिका विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिक लाई धेरै कमिसनको प्रलोभनमा ठगी गर्दै आइरहेकोे छ । धेरै कमिसन पाइने प्रलोभन र आशा देखाउदै आर एम(५८० देखि आर एम(५८०० सय सम्म असुल गरि नेपाली श्रमिकहरूलाई लामो समय देखि ठगी गर्दै
गैर प्रबासीलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्दै ! सुरुमै ४५ जना नेपाली परे …
admin January 8, 2018 प्रवास 0
काठमाडौं, २४ पुष । अमेरिकाको इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसिएसले सन् २०१७ करिब २ लाख २६ हजार १ सय १९ जनालाई देशबाट निकालेको छ । यीमध्ये नेपालीहरु ४५ जना पनि परेका छन् । ८१ हजार आन्तरिक डिपोर्टेसनमा परेका छन् । सन् २०१७ मा गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा बसोबार गर्ने र गैरकानुनी गतिविधिमा
नेपाली हत्यारालाई समात्यो अमेरीकन पुलिसले ! २ दशक बीचको पहिलो सफलता
काठमाडौं, २३ पुस । नेपालमा एक महिलाको बलात्कार र हत्या गरी फरार भएका एक जना नेपाली अमेरिकी प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । १७ वर्ष अगाडि झापा चन्द्रगढीकी सन्ध्या चौधरीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर फरार भएका झापाकै लीलाराम गौतमलाई अमेरिकी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । झापा चन्द्रगढी ३ का स्थायी बासिन्दा रहेका ४० बर्षीय
बामपन्थीको जित सँगै ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछी चिनले सहुलियतमा २ ओटा अत्याधुनिक बिमान दिदै !
admin January 6, 2018 प्रवास 0
काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानतर्फ थप गन्तव्य विस्तार गर्ने भएको छ। नयाँ गन्तव्यमा उडान थप्न विमान भित्र्याउनेदेखि दक्ष जनशक्ति पाइलट व्यवस्थापनमा जुटेको निगमले जनाएको छ। हाल दुई वटा वाई-१२ विमानबाट आन्तरिक उडान भर्दै आएको निगमले चीनबाट थप दुई विमान ल्याउँदैछ। तीन महिनाभित्र चीनबाट नयाँ जहाज आइपुग्ने र नयाँ गन्तव्यमा